बीपीको बिद्रोह लोकार्पण « LiveMandu
नेपाली राजनीतिमा जति बिपी कोइरालाको चर्चा भएको छ सायदै अरु कोहि राजनीतिज्ञको चर्चा भएको होला । प्रथम निवाचित प्रधानमन्त्री कोइराला तीक्ष्ण बुद्धि, शिघ्र निर्णय, अभिभावाकत्व ग्रहण, नेतृत्वकौसल झुझारुपना एबंम क्रन्तिल्कारिताले नै उनी नेपालि समाजमा शताब्दीयौ सम्म स्मरणमा रहेने नेता बनेका थिए । यी नै नेता एब साहित्यकार बिपी कोइरालाको बारेमा लेखिएको पुस्तक ” बिपीको विद्रोह” नामक पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । यस पुस्तकका लेखक जगत नेपाल हुन् ।
बाह्रखरी बुक्सको पहिलो प्रकाशनको रुपमा आएको उक्त पुस्तकको बिमोचन आज (शुक्रबार) काठमाडौंको गैरीधारास्थित एलिस रिसेप्सनमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गरे । कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईसहित राजनीतिक विश्लेषक डा. हरि शर्मा, शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा, डा. ज्ञानु पाण्डेलगायतले पुस्तकमाथि टिप्पणी गरेका थिए ।
उक्त पुस्तकमा बिपीले आफ्नो जीवनकालमा उजागर गर्न नसकेका र बाकि रहेका कुराहरु समिटिएको “बिपीको विद्रोह”का लेखक जगत नेपालले बताए । यस पुस्तकमा बीपीको जन्म देखि २०३६ साल सम्म बिपीको बिद्रोही चरित्रको बारेमा उजागर गरिएको ।